Qaramada Midoobey oo si kulul uga hadashay xasaradda Siyaasadeed. – Hornafrik Media Network
Qaramada Midoobey oo si kulul uga hadashay xasaradda Siyaasadeed.
By HornAfrik	 On Mar 24, 2018
Hornafrik-David Beasley oo ah Madaxa fulinta Hay’adda Cunna Aduunka ee WFP loosoo gaabiyo ayaa sheegay in Xasaradaha ka jira dalalka Somalia, Yemen, Koofurta Sudan iyo Waqooyi Galbeed Nigeria Xasaradaha ka jira ay sababi karaan Gaajo ay u geeriyoodaan dadka halkaa kunool.
Qaramada Midoobe waxa uu ka dalbaday in ay u istaagto sidii dhinacyada ku lugta leh Xasaradahaasi ay ku qancin laheyd in loo gurmado dadka gargaarka u baahan.
Ciidamada amaanka K/Galbeed oo dilay Sarkaal Ajnabi ah oo ka tirsan Al-Shabaab.
aqalka sare oo guddi rasmi ah u saaray kiiska weerarki hooyga Senator Cabdiqeybdiid.